Fanantenana sy tahotra
Vol. 14 NOVAMBRA, 1911. Tsia
Nitsangana teo amin'ny vavahadin'ny Lanitra i HOPE ary nijery ny filan-kevitr'ireo andriamanitra.
"Inty, oh, mahagaga!", Niantso ilay mpanampy selestialy, ary lazao anay hoe iza ianao ary inona no tianareo. "
Niditra ny fanantenana. Ny hafalian'io rivotra io dia feno hafaliana sy hafaliana talohan'ny tsy fantatra tany an-danitra. Ao aminy, ny hatsaran-tarehy dia mirakitra ny lazany, ny heriny dia nanolotra ny tehim-peony, ary ny fijerin'ny zavatra rehetra izay tadiavina dia misokatra amin'ny fijerin'ny olona tsy mety maty. Ny hazavana Supernal nivoaka avy amin'ny mason'ny fanantenana. Nitsoka fofona tsy fahita firy izy. Ny fihetsik'izy ireo dia nampiakatra ny fahasarotam-piainana tamin'ny fifaliana mahafinaritra ary naneho ny endrika haitraitra maro. Ny feony dia nanosika ny areti-nify, nanamafisany ny fisainana, nahatonga ny fo am-pifaliana, nanome hery vaovao ho an'ny teny, ary mozika mamy kokoa noho ny an'ny choristera selestialy.
"Izaho, Hope, dia nateraky ny Thought, rainao, ary nokarakarain'i Desire, Mpanjakavavin'ny Underworld, ary mpitarika ny faritra afovoany amin'izao tontolo izao. Saingy na dia notononina ho ray aman-dreny tsy mety maty aza aho, dia efa tsy misy intsony, tsy manan-dray aman-dreny, ary mandrakizay toy ny rain'ny rehetra.
"Nibitsibitsika tamin'ny Mpahary aho rehefa noforonina izao tontolo izao, ary namelona ahy izy. Nandritra ny fifandimbiasan'ny atody manerantany, dia nampientanentana ny mikraoba aho ary nanafaka ny heriny ho an'ny fiainana. Tamin'ny fihomehezana sy ny lamaodin'izao tontolo izao, dia nihira ny fepetran'ny fiainana aho ary nanatrika ny famaranana ny fitsaboana ho lasa endrika. Tamin'ny tonon-taonan'ny natiora dia nidera ny anaran'ny Tompony aho tamin'ny nahaterahany, saingy tsy naheno ahy izy ireo. Niara-nandeha tamin'ireo zanaky ny tany aho ary tamin'ny hafaliana am-pifaliana dia nanambara ny fahagagana sy ny voninahitry ny Thought, ny mpitaingina azy ireo saingy tsy nahalala azy. Nasehoko ny lala-mahitsy mankany an-danitra ary nokilasiny ny lalana, fa ny mason'izy ireo dia tsy mahatsikaritra ny hazavàko, ny sofiny dia tsy mihaino ny feoko, ary raha tsy hidina ny afo tsy mety maty mba hanazava ny solika azoko omena, Ny fo dia ho alitara alo-po, ho fantatro sy tsy fantatro izy ireo, ary handalo ao anatin'io tsy fetezana izay nantsoina azy ireo izy ireo, raha tsy nahavitana izany izay nokasainy tamin'ny heviny.
"Ireo izay nahita ahy dia tsy hadinoko velively. Ao amiko ry oh zanaky ny lanitra, jereo ny zava-drehetra! Miaraka amiko ianao dia afaka mitsangatsangana eny an-tsisin-tany ao amin'ny faritra selestialy, ary any amin'ny havoana be voninahitra sy tsy voamarina izay mbola tsy fantatra. Fa aza atao tsinontsinona amiko, fa raha tsy izany, dia ho very ny herinao, ny fahadisoanao, ary mety hianjera ao anaty lavaka ambany indrindra amin'ny helo. Na izany aza, any amin'ny helo, any an-Danitra, na any aoriana, homba anareo aho raha manao izany ianareo.
"Amin'izao tontolo miseho izao, ny iraka ataoko dia ny mamantatra ny zavamisy rehetra amin'ny tsy misy. Izaho dia tsy misy fahafatesana, fa ny endriko dia ho faty ary hiverina amin'ny endrika miova mandrakariva aho mandra-pihazakazan'ny olombelona. Amin'izao tontolo ambany kokoa izao no hiantsoana ahy amin'ny anarana maro, saingy vitsy dia hahalala ahy tahaka ahy. Ny olona tsotra dia hidera ahy toy ny kintana goavambe ary tarihin'ny hazavàko. Hanambara amiko ny fianarana ary manameloka ahy ny hailikilika. Tsy hijanona ao amin'ny tontolo ambany kokoa izay tsy hitako ato anatiko aho. "
Rehefa niresaka tamim-pahatsorana ireo andriamanitra ireo dia niato ny fanantenana. Ary izy ireo, tsy naneho ny fihetsika nataony, dia nitsangana ho toy ny iray.
"Avia, tena te ho faty," hoy izy ireo niantsoantso hoe: "Mitaky anao aho ho toy ny ahy manokana."
"Andraso" hoy Hope. "Ry zanaky ny Mpahary! mpandova ny Lanitra! Izay milaza ahy ho ahy irery dia kely indrindra amiko mahafantatra ahy tahaka ahy. Aza maika loatra. Tarihin'ny safidinao amin'ny alalan'ny antony, mpiaro ny andriamanitra. Ny antony dia manambara ahy hoe: Jereo amiko tahaka ahy. Aza manadino ahy ny endriky ny fiainako. Raha tsy izany dia vonoina ho anao aho mba hivezivezy sy hidina ireo izao tontolo izao, ary ho vonoina ianao hanaraka Ahy ary handeha amin'ny tany amim-pifaliana sy alahelo amin'ny traikefa tsy tapaka mandra-pahitanao ahy amin'ny fahadiovam-pahazavana, sy hiverina, voavotra miaraka amiko any an-Danitra. '
"Miresaka momba ny fahalalana, ny fahasoavana, ny fahafatesana, ny sorona, ny fahamarinana. Nefa vitsy amin'ireo izay handre ny feoko no hahatakatra. Handika ny teniko ao amin'ny fon'izy ireo izy ireo ary amiko dia hitady ny endrik'izao tontolo izao, ny fahasambarana, ny laza, ny fitiavana, ny hery. Nefa noho ny zavatra izay tadiaviny dia hotsarovako izany; mba hahafahan'izy ireo mahazo izany fa tsy mahita ny zavatra tadiaviny, dia mbola hiady mafy izy ireo. Raha tsy mahomby izy ireo, na toa efa tsy nahomby indray, dia hiteny aho ary hihaino ny feoko izy ireo ary hanomboka indray ny fikarohana. Ary hikaroka sy hiezaka foana izy ireo mandra-pahitan'izy ireo ahy ho an'ny tenako fa tsy ho valim-bavaka.
"Hendre, tsy mety maty! Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny soedoa Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny soedoa Ao anatin'izany fahaton-dohany izany dia misy ny herin'ny famoizam-po sy ny fonareo rehefa manafina ahy amin'ny masonareo.
"Nanambara ny tenako aho. Ankafizo aho. Aza manadino ahy. Inty aho. Raiso aho araka izay tianao. "
Ny faniriana no nifoha tamin'ny andriamanitra. Ny sehatra tsirairay ao amin'ny Fanantenana dia tsy misy afa-tsy ny tanjon'ny faniriana fohifohy. Ny marenina ka hatramin'ny antony ary ankafizin'ny loka nojerena, dia nandroso izy ireo ary niteny tamin'ny feo maneso:
"Manantena anao aho. Ho mandrakizay ianao. "
Niaraka tamin-katezerana ny tsirairay dia nahasahy nanintona ny fanantenany. Saingy na dia toa ninoany aza fa nahazo ny loka izy dia nandositra ny Fanantenana. Ny fahazavan'ny Lanitra dia nivoaka niaraka tamin'ny Fanantenana.
Rehefa nandeha haingana ireo andriamanitra hanaraka ny Fanantenana, dia nisy aloka mahatsiravina namely ny vavahadin'ny Lanitra.
"Nijangajanga," hoy izy ireo. "Mitady fanantenana izahay, fa tsy Shadow tsy hay hazavaina."
Nihorakoraka ny Shadow tao anaty atody:
Ny fahanginan'ny fahafatesana dia niorina tamin'ny rehetra. Nipararetra ny habakabaka rehefa nibitsibitsika eran'izao tontolo izao ny bitsiky ny anaran'ny tahotra. Tao anatin'io bitsibitsika io dia nitebiteby ny fijalian'ny alahelo, nitebiteby ny alahelon'ny alahelon'izao tontolo izao amin'ny alahelo ary ny fahadisoan'ny olona maty vokatry ny fahakiviana tsy misy pentina.
"Avia", hoy ny alahelo, "nanaisotra ny fanantenana ianao ary nantsoiko. Miandry anao eo ivelan'ny vavahadin'ny Lanitra aho. Aza mitady fanantenana. Izy ihany no jiro maivana, lelam-pitaratra. Mamelombelona ny fanahy amin'ny nofinofy tsy mendrika izy, ary ireo izay ankafiziny dia lasa mpanompoko. Tsy misy intsony ny fanantenana. Mijanòna ao amin'ny lanitra any an-danitra, Andriamanitra, na mandalo ny vavahady, ary ho mpanompoko, ary hitondra anao hidina sy hidina eny amin'ny habakabaka amin'ny fikarohana tsy misy vokany aho, ary tsy hahita azy intsony ianao. Rehefa nibitsika izy ary nanolo-tena haka azy, dia hahita ahy eo amin'ny toerany ianao. Jereo aho! Aza matahotra. "
Nahita tahotra ireo andriamanitra ary nangovitra izy ireo. Tao anatin 'ny vavahady dia nisy fiainana foana. Ambonin'izany rehetra izany dia maizina, ary nihovotrovotra ny tahotra ny tahotra. Nisy kintana lavalava niverimberina ary ny feo malemy nantenaina dia naneno ny haizina.
"Aza mihazona tahotra; aloka fotsiny izy. Raha fantatrao ny momba azy dia tsy afaka manisy ratsy anao izy. Rehefa nandalo ianao ka nandroaka ny tahotra dia hanavotra ny tenanao, hahita ahy ary hiverina any an-danitra. Manaraha ahy ary avelao hitarika anao ny Antony. "
Na ny tahotra aza dia tsy afaka manakana ireo tsy mety maty izay nihaino ny feon'ny fanantenana. Hoy izy ireo:
"Tsara kokoa ny mandehandeha any amin'ny faritra tsy fantatra amin'ny alalan'ny Fanantenana fa tsy ao anaty lanitra iray tsy misy tahotra ao am-bavahady. Manaraka ny fanantenana isika. "
Nandritra ny fifanarahana iray dia nandao ny Lanitra ilay mpampiantrano tsy mety maty. Tao ivelan'ny vavahady, ny tahotra dia nisambotra azy ireo ary nitondra azy ireo ary nanadino azy ireo mihoatra noho ny fanantenana.
Nentina tamin'ny tahotra sy nirenireny tany amin'ny tontolo maizim-pito, dia nidina tany amin'ny tany aloha ireo tsy mety maty ary naka ny fonenany izy ireo ary nanjavona teo anivon'ny olombelona mety maty. Ary ny fanantenana dia niaraka tamin'izy ireo. Fotoana izao, efa nanadino hoe iza izy ireo ary tsy afaka, afa-tsy amin'ny fanantenana, tsarovy ny nahatongavan'izy ireo.
Ny fanantenana dia mibosesika ao am-pon'ny tanora, izay mahita ny lalana mankany an-kibon-dreniny amin'ny fahatanorana. Ny antitra sy reraka dia mijery eto an-tany amin'ny fanantenana, fa ny fahatahorana dia tonga; Izy ireo dia mahatsapa ny lanjan'ny taona sy hatsaram-panantenana ary avy eo dia mibanjina ny lanitra. Nefa rehefa miaraka amin'ny Fanantenana izy ireo dia mijery any an-danitra, matahotra ny tazony ary tsy mahita ny varavarana, fahafatesana.
Voafandrika amin'ny tahotra, tsy mety maty ny tsy hita maso eto an-tany amin'ny fanadinoana, fa ny fanantenana dia miaraka amin'izy ireo. Indray andro, ao amin'ny fahazavana izay hita amin'ny fahadiovam-piainana, dia handroaka ny tahotra, hahita ny Fanantenana, ary hahalala ny tenany sy ny lanitra.